गुगल द्वारा तपाईंको नयाँ वेबसाइट क्रल गरिएको पाउनुहोस्
हालसालै मैले धेरै नयाँ वेबसाइटहरू सुरू गरें। जसरी एड्रेसट्यु बढेको छ र मेरो समय स्वतन्त्र भएको छ, यसले नयाँ विचारहरूको एक उत्तम आँधी र कार्यान्वयन गर्न खाली समय सिर्जना गरेको छ, त्यसैले मैले दर्जनौं डोमेनहरू किनेको छु र बायाँ र दायाँ माइक्रो साइटहरू लागू गरेको छु। अवश्य पनि, म अधीर छु, पनि। म सोमबार एक विचार छ, मंगलवार निर्माण गर्नुहोस्, र म बुधवार ट्राफिक चाहन्छु। तर यसले मेरो नयाँ डोमेन गुगल खोजीमा देखा पर्न दिनहरू वा हप्ताहरू लिन सक्दछ, जब म आफ्नो डोमेन नाम खोज्दैछु।
त्यसोभए, मैले माकुरा छिटो आउनको लागि एउटा सूत्रसँग टिंकिering गर्न सुरु गरें। यदि SEO एक alechemy हो, तब यो सुरूवात सूचका to्कमा समय बृद्धि गर्नका लागि मेरो गृह-पेसा हो। यो सरल छ, तर प्रभावी साबित। मेरा हालसालका केही प्रयोगहरू क्रल गरिएका छन् र २ results घण्टा भित्र खोज परिणामहरूमा देखा पर्दै छन्। म यी 24 सरल चरणहरू अनुसरण गर्दछु।
तपाईंको अन-पृष्ठ SEO पहिले सेट अप गर्नुहोस्कम्तिमा न्यूनतम। स्वीकार्य रूपमा, यसको क्रल हुनेसँग केहि गर्नका लागि छैन, तर यदि तपाईंले पहिले यो गर्नुभएन भने, अर्को steps चरणहरू व्यर्थमा छन्। विशेष रूपमा, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको शीर्षक ट्यागहरू अनुकूलित छन्। किन यो यति महत्त्वपूर्ण छ? किनभने, चाँडै हामी तपाईंको पृष्ठमा एक माकुरा पाउन सक्दछौं, यसको मतलब तिनीहरू चाँडै फर्कनेछैनन्। त्यसोभए, यदि तपाईंको प्रारम्भिक सुरुवातमा राम्रोसँग लेखिएको शीर्षक ट्यागहरू छन्, भने तपाईं अर्को केही हप्ताहरूमा अडी रहन सक्नुहुनेछ गुगलको अनुक्रमणिकामा-भन्दा कम क्यास सामग्रीको साथ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई जे हेर्नमा हतारिदै हुनुहुन्छ केहि हप्ताको लागि देखिने योग्य छ - जब तपाई अर्को क्रलको लागि पर्खनुहुन्छ।
गुगल एनालिटिक्स स्थापना गर्नुहोस्। एउटा साधारण कारणको लागि साइटम्याप अघि यसो गर्नुहोस्: यसले समय बचत गर्दछ। Google Webmaster को साथ तपाइँ तपाइँको नयाँ वेबसाइट प्रमाणित गर्न को एक तरीका माध्यम बाट हो विश्लेषण लिपि त्यसोभए, एउटा चरण बचत गर्नुहोस् र यो पहिले गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि भ्रमण गर्नुहोस् www.google.com/analytics.
गुगल वेबमास्टर उपकरणमा XML साइटम्याप सबमिट गर्नुहोस्। तपाइँ कुनै पनि दर्जनौं WordPress WordPress प्लगइनहरू स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ यो साइटम्याप स्वचालित रूपमा सिर्जना गर्न, वा म्यानुअली एक बनाउन। यो सहि र गहन क्रल प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक छ, यद्यपि धेरै नौसिखिए वेबमास्टर्स विश्वास गर्दछन् कि यो क्रल हुनको लागि सबै अन्त हो। यो होइन। यदि तपाईं यस चरणमा रोक्नुहुन्छ, web 99% नयाँ वेबमास्टरहरू गरेझैं तपाईले हप्ताहरू वा महिना कुर्नुपर्नेछ तपाईंको गुगलले तपाईंको साइट क्रल गर्न सकिन अघि नै। पछि के हुने प्रक्रियाले तिव्रता दिनेछ। यो चरण पूरा गर्नका लागि भ्रमण गर्नुहोस् www.google.com/webmasters
युआरएललाई तपाईंको लिंक्डइन प्रोफाइलमा थप्नुहोस्। जब तपाईं आफ्नो लिंक्डइन प्रोफाइल सम्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग website वेबसाइट URL हरू समावेश गर्न सक्ने क्षमता छ। यदि तपाईंले पहिले नै ती सबै स्लटहरू प्रयोग गरिसक्नुभयो भने, यो समय अस्थायी रूपमा बलिदान गर्ने समय हो। अर्को एक हप्ताको लागि हटाउनको लागि युआरएल मध्ये एक छान्नुहोस् र तपाईंको नयाँ प्रकाशित वेबसाइटमा यूआरएलको साथ बदल्नुहोस्। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईं यसलाई पछि परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको क्यालेन्डरमा नोट लिनुहोस् NO SOONER भन्दा १ days दिन पछि तपाइँको लिंक्डइन प्रोफाइलमा फर्कनुहोस् र तपाइँको URL सूचीलाई पहिलेकोमा पुन: भण्डारण गर्नुहोस्। ती १ days दिनको अवधिमा Google ले नयाँ लिंक फेला पारेको छ र तपाइँको वेबसाइटमा पछ्याएको छ।
URL लाई तपाईंको गुगल प्रोफाइलमा थप्नुहोस्। गुगलले तपाईंको प्रोफाईलमा अनुमति दिएका लिंकहरूको संख्यासँग धेरै उदार छ। गुगलमा साईन ईन हुँदा, कुनै पनि गुगल पृष्ठबाट (उनीहरूको गृह पृष्ठ सहित) तपाईं माथिको दायाँ कुनामा अवलोकन प्रोफाइल क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि प्रोफाइल प्रोफाइल क्लिक गर्नुहोस्। दाँया पट्टि तपाईले "लिंक" भन्ने सेक्सन फेला पार्नु पर्छ। त्यहाँ, तपाईं अनुकूलन लिंक थप्न सक्नुहुन्छ। यहाँ, तपाईले आफ्नो मनपर्ने कुञ्जीशब्दमा लंगर पाठ सेट गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं आफ्नो गुगल प्रोफाइलमा नयाँ युआरएल थप्नुहुन्छ।
तपाईंको वेबसाइट विकिपेडियामा उल्लेख गर्नुहोस्। यो सहि छ, म विकिपेडियामा स्प्याम गर्छु। तपाइँ तपाइँको घृणा-पत्र nick@i-dont-care.com पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाइँको लक्ष्य विकिपेडियामा सम्बन्धित लेखमा तपाइँको वेबसाइटमा एक स्रोत (एक ब्लग लेख वा केहि अन्य जानकारी पृष्ठ) उद्धृत गर्नु हो। यो गर्न को लागी एक कला छ। यहाँ लक्ष्य छ: तपाईंको उद्धरण कम्तिमा hours२ घण्टा बाँच्नको लागि कसैले विकिपेडियामा यसलाई मेटाउँदछ। यो पूरा गर्नका लागि, कुनै-त्यस्तै लोकप्रिय लेख खोज्नुहोस्। यदि लेखले प्रति दिन धेरै सम्पादनहरू प्राप्त गर्दछ भने, यो सम्भव छ कि गुगलको बट्सले यसलाई पत्ता लगाउँन अघि तपाईंको थप छिटो मेटिनेछ। तर, यदि तपाइँ लेख फेला पार्नुहुन्छ जुन मासिक एक पटकको बारेमा सम्पादनहरू प्राप्त गर्दछ, त्यो तपाइँको सुनौलो टिकट हो। एक बुद्धिमान र प्रासंगिक (हो, शैक्षिक र तथ्यात्मक पनि) नयाँ वाक्य थप्नुहोस् रaथप गर्नुहोस् CITE_WEB अन्तमा सन्दर्भ। पूर्ण नयाँ सेक्सन वा अनुच्छेद थपेर साहसी नहुनुहोस्। तपाईंको लक्ष्य बट्स द्वारा देख्नको लागि हो, तर मानवले ध्यान दिएन।
गुगल नोल लेख प्रकाशित गर्नुहोस्। एकचोटि गुगलले थाहा पाए कि विकिपेडिया यति धेरै लोकप्रिय छ, तिनीहरूले यसको प्रतिस्पर्धा गर्न प्रयास गरे। गुगल नल (www.google.com/knol) धेरै कम शैक्षिक हो र त्यहाँ स्व-रुचि लेख मेटाउनको लागि कुनै सतर्कता प्रणाली छैन। तपाईको नोल अनन्तसम्म बाँच्नको लागि तपाई लगभग ग्यारेन्टी हुनुहुन्छ। यसको अर्थ: यो राम्रो हुन्छ। केहि प्रकाशित नगर्नुहोस् जुन बाँच्नेछ र तपाईंको नाम र जीवनको लागि ब्रान्डमा नराम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्दछ। एउटा छोटो, प्रासंगिक लेख लेख्नुहोस् जस्तै ब्लग प्रविष्टि र यसलाई तपाइँको नयाँ प्रकाशित URL मा लिंक गर्नुहोस्। केहि चीजको साथ जस्तै यस नोलको शीर्षकमा कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्दछ र तपाईंको लंगर पाठमा पनि राम्रो सल्लाह दिइन्छ।
एक यूट्यूब भिडियो प्रकाशित गर्नुहोस्। केही महिना पहिले, मैले कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारे लेख लेख प्रकाशित गरें YouTube बाट लिंक जुस। यहाँ सामग्री दोहोर्याईकन, म केवल तपाईंलाई निर्देशनहरू पछ्याउन भन्नेछु यहाँ र तपाइँको आठौं चरण पूरा हुनेछ।
सबै जम्मा, जब म नयाँ वेबसाइट सुरू गर्दछु म काम सक्नु भन्दा अघि कम्तिमा minutes० मिनेट काम गर्नुपर्दछ। यदि म यी आठै चरणहरू गर्दछु भने म विश्वस्त हुन सक्छु कि मेरो साइट केहि दिनहरूमा गुगल खोजमा देखा पर्नेछ, यदि घण्टा होइन। कसरी? किनकि मैले गुगललाई नयाँ यूआरएल पत्ता लगाउन हरेक अवसर दिएकी छु। यदि तपाईंले कुनै अन्य विधिहरू फेला पार्नुभयो जुन तपाईं आफ्नो “किमिया” प्रयोग गर्नुहुन्छ कृपया तल टिप्पणीहरूमा स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
टैग: व्यवसाय परिणामकुपन अनुप्रयोगहरूमोबाइल कूपनसाराह रोबिनस्लाइडर
मोबाइल मार्केटिंग र विज्ञापन
जुन 28, 2011 मा 6: 23 PM
म तपाईंलाई राम्रो काम निकको लागि बधाई दिन चाहन्छु।
जुन 28, 2011 मा 6: 28 PM
उत्कृष्ट लेखन, निक। म बुलेट पोइन्टहरू, मुख्य शब्दहरू, र हाम्रो व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य वस्तुहरू सहित मेरो आफ्नै वेबसाइटमा भर्ने प्रक्रियामा छु। यो म सबै कुरा अन्त्यमा जस्तो देखिन चाहन्छु भन्ने होइन, तर यो सुरुवात हो, र यसले प्रभाव पारिरहेको छ। मलाई लाग्छ, तपाईंले मलाई एकपटक सोध्नुभएको थियो, "तपाईंलाई सुरु गर्नदेखि के रोकिराखेको छ?" जसमा मैले जवाफ दिएँ, "केही छैन, म अर्को हप्ता सुरु गर्दैछु।" जसमा तपाईंले जवाफ दिनुभयो, “होइन। के कुराले तपाईलाई आज सुरु गर्नबाट रोकेको छ?"
जुन 29, 2011 बिहान 1:26 बजे
मैले भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ 😉
के तपाइँ तपाइँको वेबसाइट प्रतिलिपि पर्याप्त कुञ्जी शव्द भरिएको नभएसम्म क्रल को लागी पेश गर्न को लागी बन्द गर्दै हुनुहुन्छ ... er ... मेरो मतलब "अप्टिमाइज" हो?
जुन 29, 2011 बिहान 12:51 बजे
केही ठोस उदाहरणहरूले भरिएको राम्रो लेख, तर दुई आश्चर्यजनक भूलहरू सहित; ट्विटर र फेसबुक पृष्ठहरू। गुगलले ट्विटर स्ट्रिममा पहुँचको लागि भुक्तान गरिरहेको हुनाले, सभ्य अख्तियार भएको खाताले लिङ्क साझा गर्ने र राम्रो उपायको लागि यसलाई रिट्वीट गर्ने केही व्यक्तिहरूले गुगललाई अनुसन्धान गर्न पाउनेछन्। पालना नगरे पनि । यदि तपाइँ यो सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि नो-फलोले कुनै प्रभाव पार्दैन, RSS लाई फ्रिन्डफिड खातामा फीड गर्नुहोस्।
त्यस्तै फेसबुक पेज, प्रोफाईल होइन, चाँडै क्रल हुनेछ। राम्रो उपायको लागि फेसबुक पृष्ठ स्थितिको लिङ्क ट्वीट गर्नुहोस्, र फेसबुकले ट्विटर स्थितिको लिङ्क पोस्ट गर्नुहोस्। मैले यी सिफारिस गर्नुको कारण यो हो कि धेरै मानिसहरूसँग पहिले नै एक वा दुवै सेटअप छन्।
यो कुनै पनि हिसाबले तपाईले गरिरहनु भएको कुरामा विरोधाभास छैन, केवल केहि थप जसले मेरो लागि धेरै राम्रो काम गरेको छ। कुनै पनि तरिका, नयाँ डोमेन वा संशोधित साइटमा क्रल दर र क्रल बजेट कम हुँदा गुगलले बारम्बार क्रल गरिरहेको लिङ्कहरू राख्नुले अनुक्रमणिकालाई गति दिनेछ र राम्रो विचार हो।
जुन 29, 2011 बिहान 1:24 बजे
केभिन, तपाईं सहि हुनुहुन्छ। ती दुई त्यहाँ हुनुपर्छ। यहाँ छ किन तिनीहरूले मेरो "कीमिया" नुस्खा बनाएनन्:
- ट्वीटरको साथ, सम्पूर्ण आधार यो हो कि तपाईसँग यसलाई ट्वीट गर्न उच्च-क्लआउट खाता हुन आवश्यक छ। यदि तपाइँ नयाँ ट्वीटर खाता सिर्जना गर्न जानुहुन्छ भने, म विश्वस्त छु कि क्रलरको ध्यान प्राप्त गर्नको लागि यो थोरै मूल्यको छ।
- फेसबुकको साथ, समस्या यो हो कि पृष्ठले राम्रो गर्न धेरै समय लिन्छ, र खराब काम राम्रो भन्दा बढी हानिकारक हुन सक्छ।
यदि तपाइँसँग स्रोत छ भने, अर्को राम्रो विचार जुन म प्राय: गर्छु तर सबैलाई आवश्यक रूपमा सिफारिस गर्न सक्दिनँ जुन तपाइँको पहिले नै स्वामित्व भएको उच्च-अधिकार डोमेनबाट तपाइँको नयाँ वेबसाइटमा लिङ्क राख्नु हो। निस्सन्देह, धेरै मानिसहरूसँग पहिले नै एउटा स्वामित्व छैन, त्यसैले फेरि, मैले किमियाबाट हटाएँ।
यी थप्नु भएकोमा धन्यवाद।
जुन 29, 2011 बिहान 2:56 बजे
यी उत्कृष्ट विचारहरूको लागि धन्यवाद निक ... म मेरा ग्राहकहरूलाई दिनेछु। यदि मैले यो मेरो ब्लगमा तपाईलाई पूर्ण श्रेय दिएर पुन: ब्लग गरेमा तपाईलाई आपत्ति छ?
जुन 29, 2011 मा 1: 08 PM
मलाई कुनै आपत्ति छैन। तपाइँ यसको खण्डहरू व्याख्या गर्न वा पुन: शब्द गर्न चाहानुहुन्छ ताकि तपाइँ नक्कल सामग्रीको लागि dinged हुनुहुन्न।
जुन 29, 2011 बिहान 5:37 बजे
महान विचार निक। यो एक ठोस सूत्र हो। मैले विकिपिडिया वा नोलको बारेमा सोचेको थिइनँ, तर यो मुख्यतया निरन्तर सम्पादनहरूको कारण हो। मैले भविष्यमा यो सम्झनु पर्छ।
जुन 29, 2011 मा 1: 25 PM
युट्युब आइडिया wikepedia भन्दा राम्रो छ ………..
जुन 29, 2011 मा 1: 35 PM
म एक बिना अर्को गर्न सक्दिन। गुगल अप्रत्याशित छ, र विकिपिडिया प्रायः क्रल हुन्छ।
म केवल मेरो ब्लगमा लिंक राख्छु, र कममा एक दिन म यसलाई क्रल हुन्छु। सजिलो
जनवरी 3, 2012 मा 9: 18 एएम
राम्रो सुझाव धन्यवाद